Farmaajo Dab buu ku ciyaarayaa. (Farmajo is playing with fire)
Saturday January 06, 2018 - 14:13:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Faragelinta iyo XadgudubkaSomaliya ee kuwajahanSomaliland waa kuwii ugu darnaa tan iyo1991. Mawqifka Xukuumadda Farmaajo waa mid xagal daacinaya wada-hadalladii Somaliland iyo Somaliya, waana mid halis ku ah dadaaladdii iyo fursaddahii lagu abuurayay jawi suurta geliya in heshiisyo waara lagu gaadho oo la noqdo 2 dal oo deris ah.
Afxumo colaadwaxba kaagama tarto nabaddna way kaa kaxeysaa.
Gardarrada iyo Daandaansigaqaawan ee noocan ahi waa qaar keeni karacawaaqib xumo oo dhaxal xumo ku reebi kara labada shacbi ee walaalaha ah.
Ficiladan isa soo taraya ee sheegashada hawada Somaliland iyo ku xadgudubka dhulkeedu waxay muujinayaan in Dawladda Xamar aanay doonaynwax wada-xaajood ah, oo aanay marnaba daacad ka ahayn wada hadalkii u socday muddada dheer, haatanna ay isku dayeyso in ay minjo xaabiso heshiisyadii hore loo gaadhay.
Ujeeddada Farmaajo iyo wuxu uga dan leeyahay arrimahaasi "waa qiiq isku qarin" iyo inuu Shacbiga ka jeediyo xaqiiqada jirta, kadib markii uu ku guul-darraystayxilkii loo igmaday oo Dadweynihii ku hungoobeen. Ma aha markii uu tahli kari waayay inuu xal u helo arrimaha gudihiisa inuu bilaabo hawl-gallo qar iska xoornimo ah.
Maha in maamulka Muqdisho uu murrankii badda ee Kenyakala dhexeeyey uu isku dayo inuu uga xuub siibto sheegashadahawada Somaliland. Somaliya waa in ay hurdada ka toostaa oo ogaataa in tallaabooyinka noocaasi ahi aanay meelna gaadhsiinayn.
Falaadhi gilgilasho kaagama go' do
Somaliya waa in ay maanka ku haysaa in aan cidna sharci darro ku siin karin hawada Somaliland, Somalilandna aanay marna iyo sinaba u aqbali karin in hawadeeda la qaato,isla markaana udulqaadan doonin in lagu soo xadgudbo ciiddeeda.